Isbitaalkii weynaa ee Istartiin oo ku xirmay dagaalada Guriceel | Dhacdo
Home Wararka Maanta Isbitaalkii weynaa ee Istartiin oo ku xirmay dagaalada Guriceel
“Maraan meel dhexe soo marayno oo lugeynayno, niman difaac ku jiraa na soo xabadeeyay, waan kala cararnay, waana fiicanahay.” Ayuu yiri Dr. Kaahiye Cismaan Cumar.
“Laba ka mida goobihii ugu waaweynaa ee aan lahayn, sida isbitaalkii weynaa ee degmada iyo mid kaloo ku yaalo deegaanka, midna shalay ayuu gubtay, midna maanta ayuu gubtay, waxaad mooddaa in bartilmaameedyo ay noqonayaan goobihii caafimaadka.” Ayuu yiri Dr. Kaahiye Cismaan.
Previous articleTaliyihii Ciidanka Haramcad ee Galmudug oo ku dhintay dagaalka Guriceel
Next articleKumaandooska Danab oo Saraakiil Ahlu Sunna ah kala baxay goob caafimaad